Uwe, Ọ dịghị onye kpara akwa, akwa kpara - Anbzeng
banyere anyị ANBZENG
SHIJIAZHUANG ANBZENG Bubata & Mbupụ ahia CO., LTD. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebupụ akwa na uwe na-ebubata ngwa ahịa na azụmaahịa, ọkachasị ịdabere na azụmaahịa mba ụwa.Our ụlọ ọrụ anyị dị na Shijiazhuang City nke mpaghara Hebei, yana ụlọ ọrụ nrụpụta dị elu na otu ndị ọkachamara na mpaghara HEBEI.
Companylọ ọrụ anyị nwere ngalaba abụọ, otu bụ Ngalaba Uwe, nke ọzọ bụ Ngalaba Fabric.
Ngwaahịa: uwe, jaket, jeans, uwe elu, T-shirt, uwe mwụda, uwe ogologo ọkpa, obere uwe ogologo ọkpa, akwa n'èzí, akwa na ihe ndị ọzọ.
--Fabric ngwaahịa: owu, T / C, CVC, dyed, denim.
Jacquard Corduroy rickwà-126
Jacquard Corduroy rickwà-114
Ugboro abụọ Layer Jacquard Fabri ...
21 Wales Imitomi Slub Jac ...